राष्ट्रपतिद्वारा नवदुर्गा भवानीको द्यो ब्वय्केगु पूजा अवलोकन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
भक्तपुर — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार भक्तपुरमा नवदुर्गा भवानीको द्यो ब्वय्केगु पूजाको अवलोकन गरेकी छन् । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघले स्वर्णजयन्ती अवसरमा गरेको द्यो ब्वय्केगु पूजाको राष्ट्रपति भण्डारीले अवलोकन गरेकी हुन् । उनले नवदुर्गा भवानीको गणनाचले नाच्ने ईना ज्वनेगु प्याखः अवलोकन गरिन् ।
कार्यक्रममा संयोजक उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद ताम्राकारले नवदुर्गा देवगणका काल भैरवलाई मुल पूजा हस्तान्तरण गरेका छन् । भैरवबाट मुलपूजा आरम्भ भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी दरबार स्क्वायरस्थित तलेजु भवानीको पूजा तथा दर्शन गरेकी छन् । मुल पूजामा नवदुर्गाको मू बहाः (मुख्य बली) सुंगुरको बली दिइएको छ । मूबहाः बली दिँदा कुनै हतियार प्रयोग गर्न नपाइने परम्परा छ । कालभैरवले नङ्ले मूबहाः सुंगुरको बली दिएका छन् ।
द्यो ब्वयकेगु पुजाका अवसरमा मुलपूजापछि नवदुर्गा देवगणलाई सगुन दिनुका साथै विभिन्न परिकार, मिठाई, पान मसलासहितको नेवारी भोज चढाएको छ । कार्यक्रमकै अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को कार्यालय अवलोकन गर्नुका साथै जिसस प्रमुख नवराज गेलाल, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसद महेश बस्नेत लगायतसँग छलफल गरेकी छन् । भोजपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नवदुर्गा देवगणको पुजा र दर्शन गर्नुका साथै दक्षिण चढाएकी छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गर्दै भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिले भक्तपुरलाई आर्थिक र सांस्कृतिक नगरीको पहिचानका रुपमा स्थापित गर्न नवदुर्गा देवगणको द्यो ब्वय्केगु पूजा र मौलिक कलाको प्रदर्शनी गरेको जानकारी दिए । भक्तपुरको मौलिक उत्पादन र धार्मिक परम्परा विश्व प्रसिद्ध रहेको चर्चा गर्दै प्रजापतिले भक्तपुरलाई आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन संघले सरकारी, गैरसरकारी निकाय र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कृषि, पर्यटन र निर्यातमुखी हस्तकलाको विकासमा जोड दिँदै आएको बताए ।
कार्यक्रम राष्ट्रपति भण्डारीले भक्तपुरको मौलिक हस्तकलाका सामाग्रीहरुको प्रदर्शनीसमेत अवलोकन गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले नवदुर्गा देवगणलाई दक्षिणा चढाएका छन् ।
नवदुर्गा भवानीको नाच व्यवस्थापन एवं मौलिक जात्रा संरक्षणका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर प्रमुख नवराज गेलालको संयोजकत्वमा १५ लाख र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ गरी कूल २० लाख १५ हजार रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरिएको जनाएको छ ।
अक्षयकोष वृद्धिका लागि संघले थप पहल गर्ने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिले बताए । प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ २१:३८
काठमाडौँ — राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूले अंग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा नेपाल आधुनिक प्रविधिसहित तीव्र गतिले अघि बढिरहेको औंल्याएका छन् । राजधानीमा शनिबार सुरु पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलनमा सहभागी उनीहरूले नेपालमा युवावस्थामै मिर्गौला फेल हुने समस्या बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, अंग प्रत्यारोपण समाज नेपाल र इन्डियन सोसाइटी अफ अरगेन ट्रान्सप्लान्टेसको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, भारत, नेपाललगायत करिब ३ सय ५० जना प्रत्यारोपण क्षेत्रका विशेषज्ञको सहभागिता छ ।
'नेपालमा बढी युवाको मिर्गौला फेल भइरहेको छ,' इन्डियन सोसाइटी अफ अरगेन ट्रान्सप्लान्टेसनका अध्यक्ष प्रा.डा.सन्दीप गुलरियाले कान्तिपुरसँग भने, 'यो रोगबाट बचाउका प्रयास राम्रो भएको मुलुकमा पाको उमेरका व्यक्तिको मात्रै मिर्गौला फेल हुन्छ ।'
पश्चिमा मुलुकमा मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका पाको उमेरका व्यक्तिमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । 'सन् २०१९ मा बेलायतमा बूढापाका, मुटुरोगी, उच्च रक्तचापलगायत कमजोरी भएकाहरू मिर्गौला फेल भएर प्रत्यारोपण गराइरहेका छन्,' बेलायतको न्युक्यास्टल विश्वविद्यालय नेप|mोलोजीका प्राध्यापक डा. नील सिरिनले भने, 'नेपालमा युवा, प्राथमिक ग्लोमेरुलोनेप|mाइटिस आदिले गर्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने अवस्था छ ।'
एक दशकअगाडि वीर अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु गर्न सघाएका डा.गुलरियाले भारतमा मिर्गौला रोगबाट बचाउने प्रक्रिया राम्रो भएकाले त्यहाँ युवावस्थामा मिर्गौलाको समस्या कम आइरहेको बताए । विशेषज्ञका अनुसार सरकारले मधुमेह र उच्च रक्तचापको समयमै निदान र नियन्त्रणमा प्रयास गरे मिर्गौला फेल हुने समस्यामा कमी आउँछ ।
सम्मेलनका अध्यक्ष एवं प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकार चन्द श्रेष्ठले नेपालमा बर्सेनि करिब ३ हजार जनाको मिर्गौला फेल भइरहेको र त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत केही महिनामै मृत्युको मुखमा पर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले बर्सेनि दुई सयदेखि अढाई सय मिर्गौला प्रत्यारोपण मुलुकमै हुन थालेको बताए । हालसम्म १ हजार ३ सय १७ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ २१:०७